ကေအိုင်အေရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား ? (ထွန်းအောင်ကျော်)
by Htun Aung Gyaw on Monday, December 31, 2012 at 1:17am ·
ကေအိုင်အေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနေပြီး မြေပြင်တိုက်ပွဲကနေ ဒီဇင်ဘာလမှာ လေ ကြောင်းမှ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တဲ့အထိ ပြင်းထန်လာခဲ့တာတွေ့လာရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကိုသမတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးနောက်ကချင်ကတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့စစ်တပ်ကိုလူသိရှင်ကြားအမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က မနာခံဘဲဆက်တိုက်မြဲတိုက်နေတဲ့အခါ သမတအမိန့်ကို ရှေ့တန်းက ရဲဘော်တွေမသိကြသေးလို့ပါ၊ မကြာခင်ရပ်မှာ ပါလို့ဆင်ခြေပေးခဲ့ပြန် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အချိန်တွေ တနှစ်သာ ကုန်လွန်လာခဲ့ပြီး စစ်ပွဲတွေရပ် မသွားခဲ့ဘဲ ပိုလို့သာဆိုးဝါးလို့လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တရုပ်-မြန်မာနယ်စပ် ကေအိုအိုဌာန ချုပ်လိုင်ဇာကိုထိုးစစ် ဆင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး လေကြောင်း မှတိုက်ခိုက်မှု အထိပြင်းထန် လာခဲ့ ပါတယ်။ ကိုယ်ညီရင်းအကိုတိုင်းရင်းသားတွေဘဲသေသေ၊ တပ်မတော်သားတွေဘဲသေသေ နောက်ဆုံးတော့တိုင်းပြည်တခုလုံးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါဘဲ။
အကယ်၍ တရုတ်ကမီးစိမ်းမပြရင် မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တရုတ်ပြည်နယ်နမိတ်ကိုကျော်ပြီးလေ ယဉ် တွေ ပျံသန်းပြီး ကေအိုင်အေကိုတိုက်ဝံ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တရုတ်ကသဘော တူထားပြီးဖြစ် တာ ကြောင့်လေ ကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်လာတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကိုသမတဦးသိန်းစိန်ကသူ့သမတသက် တမ်းအတွင်းပြည်တွင်း အုံကြွမှုမဖြစ်အောင် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းအတွက် တရုတ်အစိုးရ ကို စိတ် အနှောက် အယှက်ကြီးစွာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တရုတ်ယူနန်ပြည် နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုအပ်မှုကို ပါးစပ်နားရောက်မှပုတ်ချခံရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကေအိုင်အိုကလဲဧရာဝတီရေကာတာတည်ဆောက်ရေးကိုသဘောမတူပါဘူး ကချင်ဒေသတော် တော် များများရေမြုပ်ကုန်မှာကိုမလိုလားပါဘူး၊ နောက်ပြီးသဘာဝဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို စိုးရိမ်တာ လဲပါပါ တယ်။ ဒီအချက် ဟာတရုတ်ကသူတို့အလိုကို ကေအိုင်အို ကဆန့်ကျင်တယ်လိုမြင်ပါတယ်။ သူတို့ အလို ကို မဆန့်ကျင်တာက စစ်တပ်ဘဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်အလိုကို လိုက်ခြင်း ဟာသူတို့ အတွက် အကျိုးယုတ်စရာလို့မမြင်ပါဘူး၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အုပ် စုထဲမှာ ကေအိုင်အို ပါဝင်နေတာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကို အားပေးကူညီတာဟာ တကယ်တော့ မဆန်းပါဘူး။
နောက်တခုကသဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကိုရခိုင်ကမ်းလွန်ကနေယူနန်နယ်အထိသွယ်တန်းနေရာမှာကချင်ပြည်နယ်ဒေသတချို့ကိုဖြတ်သန်းသွားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်တွေကမကြိုက်ပါဘူး။ ဒီလိုပိုက် လိုင်းတည်ဆောက်ရာမှာတရုတ်က သူ့တိုင်းပြည်ကတရုတ်အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်ယူ လုပ်ကိုင် စေခဲ့တဲ့ အတွက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်သစ်ဖန်တီးမှုတွေမရှိသလောက်ပါဘဲ။ တရုတ်ကုန်ပဏီမြန်မာပြည်လာလုပ်တာတရုတ်အလုပ် သမားတွေဘဲအလုပ်ရကြတာ ဟာကုန်သွယ် စီးပွါး ရေးကျင့်ဝတ်ကိုဗျောင်ချိုးဖေါက်နေတာဘဲ ဆိုတာကို အတွေ့အကြုံ နုတဲ့ မြန်မာလုပ်သမား တွေရောအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါသိရှိပုံမရပါဘူး။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရင်ပြည်တွင်း အလုပ်သမားတွေကို ဦးစားပေးငှားရမ်းရမယ်၊ နည်းပညာ တွေ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဆိုတာပါပါတယ်။ ဒါကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်က ဦးပိုင်ကလဲမတောင်း ဆိုခဲ့ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။
ကချင်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးပိုက်လိုင်းသွယ်တဲ့အခါကချင်ကျေးရွာတချို့ကိုအမိန့်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းခိုင်း အုံးမှာဖြစ် လို့ကေအိုင်အေကသဘောမတူပါဘူး၊ ဒေသခံပြည်သူတွေဘာခံစားမှုမှမရှိတဲ့ ပိုက်လိုင်း သွယ်ရေး ကိစ္စကို ကချင်လူထု နဲ့ ကေအိုင်အေ ကသဘောမကျပါဘူး။ မြစ်ဆုံဆည်တည် ဆောက်စက အတင်း အဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့ရွာသားများကိုတရုတ်ထောက်ပံ့ငွေနဲ့တနေရာမှာရွာသစ်တည်ပေးသော်လည်းဒီနေရာသစ်မှာဘာပင်မှစိုက်လို့မရသလိုဆောက် ပေးတဲ့အိမ်တွေကလဲသစ်စိမ်းတွေနဲ့အလျှင် အမြန်ဖြစ် သလိုဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် သစ်တွေချောက်သွားတဲ့အခါအင်္ဂတေနဲ့ တိုင်နဲ့မကပ်တော့ဘဲ အချိန် မရွေးပြိုကျနိုင်တဲ့ အနေအထားကိုရောက်နေခဲ့တာကြောင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ် ကြားတဲ့အခါမိမိတို့ကျေးရွာကိုပြန်ချင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကပြန်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်တာ တွေ ဟာစစ်တပ်နဲ့ တရုတ်ကြောင့်လို့ကချင်လူထုကမြင်ပါတယ်။
တရုတ်ကလဲကေအိုင်အေဟာ သူတို့စီမံကိန်းမှာဖျက်မြင်းဖြစ်နေတယ်၊ စစ်တပ်ကသာသူတို့ ချယ်လှယ် ချင်သလိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်၊ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာငွေများများပေးလိုက်ရင် သူတို့ဘာလုပ် လုပ်ခွင့်ပြုတယ် ဒါကြောင့်စစ်တပ်လုပ်သမျှကိုအားပေးခြင်းဟာ သူတို့အတွက် ဘယ်လိုမှအကျိုး မယုတ်နိုင်ဘူးလို့တွက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ကေအိုင်အေကို အပြတ်ရှင်းဖို့အတွက် တရုတ် ပိုင်နက်ကိုဖြတ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမီးစိမ်းပြလိုက် တာဘဲဖြစ်တယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကေအင်ယူဌာနချုပ်မယ်နယ်ပလောကျသလိုကေအိုင်အိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာလဲစစ် နှစ် ဖက် ညှပ်ရင်ကျသွားနိုင်တယ်၊ဒါပေမဲ့ကချင်တော်လှန်ရေးကတော့သေဆုံးမသွားဘဲသူ့ပြည်သူတွေထောက်ခံနေသမျှဆက်ပြီးရှိနေမှာတော့ကြိမ်းသေတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြေ ရှင်းခြင်း ကတော့ ရှိလာ တဲ့ပါလီ မန်တွင်းမှာဘယ်လိုစပြီးတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်လာတယ်၊ ဘယ်ဖက်ကစပြီး တိုက်တယ်ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ တိုက်တယ်၊ ကေအိုင်အေ ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဘာတွေလဲ၊ တောင်းဆိုချက်တွေ ဟာလက်ခံ နိုင်တဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေလား? တပ်မတော်ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ? ဘယ်လိုသဘောနဲ့ ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်ကိုတိုက်နေရတာလဲ? ဘာအကျိုးအမြတ်တွေရမှာမို့လို့ ဒီလောက်သဲကြီးမဲကြီး တိုက်နေရတာလဲ?ဆိုတာတွေကိုလွှတ်တော်က ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးမေးသင့်တယ်၊ လွှတ်တော်မှာဒီလိုဆင့်ခေါ်ပြီးမေးနိုင်တဲ့အာဏာရှိတယ်၊ ကချင်ပြဿနာကိုလွှတ်တော်တွင်း မေးမြန်း ခြင်းအပြင် ထိုမေးမြန်းခြင်းများကိုပြည်သုကိုဖွင့်ချပြ ပြီးသဘောထားကိုပါယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားမျှတစွာ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းခြင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်။
ကချင်ပြည်မှာ၁၇နှစ်တိတိငြိမ်းချမ်းရေးရနေစဉ်ကာလမှာလိုင်ဇာဟာနယ်စပ်မြို့ ကြီးတမြို့အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့တာဟာစစ်မက်မရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါ။အလွန်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်၊ ဒီလိုမြို့ကြီး တမြို့ဖြစ်လာဖို့ အချိန်၁၇နှစ်ယူပြီး အင်နဲ့အား နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ရမယ် ဆိုတာငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုမြို့ကြီးဟာစစ်ကြောင့်ပျက်စီးပြိုပျက်သွား မယ် ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်း လိမ့်မလဲ လို့စဉ်းစားစိုးရိမ်မ်ိပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်လို့ပျက်တယ်ဆိုရင်ကချင်တွေအတွက်ဗမာတွေကိုပိုလို့မုန်းသွားတဲ့အပြင်ဒီလိုမြို့ ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လဲ ဒေါ်လာသန်းတထောင်လောက် ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့်စစ်ပွဲတွေမှာဘယ်သူနိုင်နိုင်ဘယ်သူရှုံးရှုံး ကိုယ့်လူမျိုးညီရင်းအကိုတွေချင်း သတ်ကြ တဲ့ပွဲမို့အားလုံးရှုံးတာပါဘဲ၊ ပြည်တွင်းစစ်ရှိနေသမျှ ဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်တို့ စီးပွါးရေး ကောင်းလာအောင်တို့၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ပေါက်ရေးတို့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ လူထုဘဝ လဲနိမ့်ကျနေဦးမှာပါ၊ ဒါကြောင့်သူနိုင်ငါနိုင်ဆိုတဲအတ္တစွဲတွေကိုဘေးဖယ်ပြီး ငါတို့နိုင်ငံတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး ရေး အတွက်ဒီဆင်းရဲတွင်းနွံတွင်းကိုတွန်းပို့နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ် ရောဂါဆိုးကြီးကိုဘယ်လိုသုတ်သင်မယ် ဆိုတာလွှတ်တော်တွင်းမှာဖြေရှင်းကြပါစို့လို့ဆန္ဒပြု လိုက်ပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 12/31/20120comment
Aye Aye Soe Win
ရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ်ကွက်၊ အလယ်တောရ တောင်ခြမ်းနှင်.မြောက်ခြမ်းကို ပိုင်း ခြားထားသည်.ေ၇ွှတောင်ကြား ၂ရပ်ကွင်ချောင်းငယ်လေး မြောက်ပိုင်း ဘက်ခြမ်းကမြေကွက်တွေကို ၁၉၉၄ မှစ၍ ကံထူးသူ မြေမဲပေါက်သူများ။ ဗိုလ်ခင်ညွန်.၏ဆွေမျိုးတယောက်လည်းပါသည်။သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက လူကြီးတွေလည်း ဝေစုရခဲ.သည်။ ထောက်လှန်းရေးမှ ဗိုလိမှုးတင်ထွတ်သား၊ ခရိုနီ နေမျိုး (သို.) ရဲ ထွန်း လည်းပါသည်။ နေပြည်တော် ထူထောင်ရေးတွင် ဦးသိန်းစိန် ဦး သန်းေ၇ွှတို.ကို သေအာင်အလုပ်အကျွေးပြုခဲ.သော ၊ စားကွက်ကောင်း ရခဲ.သော အာရုံဦး ဆောက်လုပ်ရေး ဒါရိုက်တာခရိုနီ ဇေိာ်ဝင်းနှင်. ၁၉၉၆ ဗိုလ်ခင်ညွန်.ကောင်းစားစဉ်က နိုင်ငံတောင်ကောင်စီ ရုံး ညွှန်မှုး ဟောင်း ( သေဆုံး) တို.လည်းပါသည်။ အချောင်ရထားသော မြေကွက်တွေပိုင်ဆိုင်မှု မှာ ခရိုနိတွေ ဘိန်း ကုန်ကူးသူတွေ၊ အရက်လှောင်စားသူတွေ၊ ခိုးရာပါ တိုက်ရာပါ ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင်. ပြခန်းဖွင်.စားသူများပါ ပါဝင်ပါတ်သက်နေသောကြောင်.--၂၀၁၂ တွင် မြေတကွက် အချောင်ရရေးအတွက် လူသတ်ကြံစည်မှုတွေကိုပင် ပတ်ဝန်းကျင် နှင်. ဗဟန်းမြို.နယ်တွင်း ရဲ၊ စည်ပင်ရုံး တို.မှ အရာရှိအချို.ကို ငွေပေးဖျက်ဆီးကာ မတရားသောရာဇ၀တ်မှုတစ်ရပ်ကို မသိမသာဖျောက်ထားနိုင်သည်. ရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ်ကွက် ( အလယ်တောရ မြောက်ခြမ်း) ဖြစ်သည်။ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ခွင်.ပြုချက် မပါပဲ၊ ရောင်းခွင်. လက်လွှဲခွင်. မရှိရဟု ပိုင်ဆိုင်မှုပြစာရွက်စာတမ်းတွေမှာ ဆိုညွှန်းထားသော်လည်း ခရိုနီတွေက တော. ဘိန်း အရက် ကျောက်မြက်ရတနာ ကစ၍ လူမြင်မခံဝင်.တာတွေ သိုလှောင်ဖေါက်ကားလျှက်၊ သာသနာ.မြေမှာ မော်လို.ပျော်လို. နေကြသည်။ ဘိန်းလုပ်၊ တန်ဘိုးကြီးအရက်လှောင်၊ ကျောက်မြက်ရတနာပြခန်းဖွင်.၊ ခရိုနီလူတန်းစားအတွက် အော်စီကကျောင်းများ ကောလိပ်များကို လူပို. ရိုက်စားသော ပညာရေးအေဂျင်စီဖွင်.၊ စီးပွားအကြီးအကျယ် ဖြစ်နေသော ရပ်ကွက်။ အလယ်တောရ မှ ရတနာစင်္ကြံန် ကျောင်းနှင်. ယခင် အမျိုးသား ရုပ်ရှင်ခြံ ကြား မြေကွက်များဖြစ်သည်။ ရတနာစင်္ကြံန် ကျောင်းတိုက်ကြီးကို ဂျပန်ခေတ်မတိုင်ခင် က ဆောက်လုပ်လှုဌာန်းခဲ.သော ဒါယကာကြီး ဦးထွန်းလှ၏ မူလ သမိုင်းဝင် အိမ်အဆောက် အဦအား မြေနီကုန်း ဗားဂရာလမ်း အမှတ် ၂၆၀ နေ ၊ ကားတာယာ ဘိန်းများ နှင်. အခြားရှုလို.ရသော ဘိန်း မျိုးပါရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားသူ ခရိုနီ တင်.နိုင် ၏လူများက က လူအင်အားသုံးပြီး ၂၀၁၂ ဂျွန်လအတွင်း ပိုင်နက်ကျူးလွန်အဓမ္မ ဖျက်ဆီးခဲ.သည်။ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလတွင် တိုင်ကြားခဲ.သော်လည်း ဗဟန်းရဲစခန်းက လက်ရှောင်နေသည်။
၀၁၂ ဂျွန်လ အတွင်း ၁၇ အီး အင်းယားမြိုင်လမ်း ရှိ ဤနေအိမ်အား ခရိုနီ တင်.နိုင်ဖျက်ဆီးအပြီးကျန်ခဲ.သော မြေကွက်နှင်. နောက်ဖေးအဖီခန်း ((ရတနာစင်္ကြံန် ကျောင်းတိုက်ကြီးကို ဂျပန်ခေတ်မတိုင်ခင် က ဆောက်လုပ်လှုဌာန်းခဲ.သော ဒါယကာကြီး ဦးထွန်းလှ၏ မူလ သမိုင်းဝင် အိမ်အဆောက် အဦ နေရာ)
အုတ်ရိုးတဖက် မင်းကွန်းကျောင်းတိုက် ကြီးထဲမှ စေတီတော်။
၂၃/၂၉ အင်းယားမြိုင်လမ်း မှာကား ခရိုနိတဦးက လက်၇ှိ စီးပွားရေးလုပ်နေဆဲ၊ ရုံခန်းများ ဖွင်.ကာ၊ အော်စီသို. ပညာရေးခေါင်းစဉ်ဖြင်. လူရိုက်သွင်းစားသော၊ ဗိုခင်ညွန်..ဗိုသန်းရွှေတို.ကိုေ၇ွှခွက်ထဲ ထည်. ကျွေးမွေးဧည်.ခဲ.သော၊ တေဇ ၏အောက်ဆွဲပါတနာ ဖြစ်ချင်လွန်းလို. နည်းပေါင်းစုံသုံးခဲ.သော၊ အကွက်ကြီးကြီး လုပ်ကွက်ရွှေ တူးရာမှာပင် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များကို လှည်.ပတ် အမြတ်ထုတ်ခဲ.သော ခရိုနီ နေမျိုးခေါ် ရဲထွန်း၏ အိမ်တလုံး။။
၂၃/၂၉ အင်းယားမြိုင်လမ်း မှာကား ခရိုနိတဦးက လက်၇ှိ စီးပွားရေးလုပ်နေဆဲ၊ ရုံခန်းများ ဖွင်.ကာ၊ အော်စီသို. ပညာရေးခေါင်းစဉ်ဖြင်. လူရိုက်သွင်းစားသော၊ ဗိုခင်ညွန်..ဗိုသန်းရွှေတို.ကိုေ၇ွှခွက်ထဲ ထည်. ကျွေးမွေးဧည်.ခဲ.သော၊ တေဇ ၏အောက်ဆွဲပါတနာ ဖြစ်ချင်လွန်းလို. နည်းပေါင်းစုံသုံးခဲ.သော၊ အကွက်ကြီးကြီး လုပ်ကွက်ရွှေ တူးရာမှာပင် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များကို လှည်.ပတ် အမြတ်ထုတ်ခဲ.သော ခရိုနီ နေမျိုးခေါ် ရဲထွန်း၏ အိမ်တလုံး။။ မူလ ဦးသိန်းအောင်၁၉၉၄ မှာ သူ. အမည်နှင်.ပေါက်သည်. ဤမြေကွက်လွတ်ကို သိန်း ၃၀၀ ဖြင်.ရဲထွန်းက စားပွဲအောက်က ၀ယ်ယူခဲ.ပြီး၊ ပညာရေးအေ၈ျင်စီအမည်ခံဖွင်.ကာ ၊ အခြားလူသိမခ့သောစီးပွားရေးမျိုးပါဤနေရာတွင် လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကာလတန်ဖိုးအ၇ဤ နေရာသည် ယခု သိန်း သောင်းချီတန်သည်ဟု ကြားသိရသည်။ ၁၉၈၈ ကာလက နေမျိုးခေါ် ရဲထွန်းသည် ထိုင်းနယ်စပ် သေဘောဘိုး ၀မ်ခါ သို. မကြာမကြာ ရောက်လာပြီး အစိုးရ အတွက် ထောက်လှန်းရေး သတင်းပေးဖြစ်ခဲ.သည်။ ဗိုခင်ညွန်. မပြုတ်ခင်အထိ ဗိုခင်ညွန်. အဆက်အသွယ်များဖြင်. ထိပ်တန်းရောက် စီးပွားဖြစ်ခဲ.သူတဦးဖြစ်သည်။
၁၉၉၄ မှ စ၍ (မူလ လက်ဟောင်းနေထိုင်သူများစာရင်းမှာ မပါဝင်သော်လည်း) ဗိုလ်မှုးကြီးတင်သိန်းလူ လက်မှတ် ဖြင်.ပုံထဲက ဤ မြေတကွက် ကို ရခဲ.သောတရုတ် ဦးဟုတ်စိန် ပိုင် ကွက်လပ်။
ညာဖက်ခြမ်း မှာ ရတနာပြခန်း ၇ှိခဲ.သည်။ တန်ဖိုးကြီး အရက်များလှောင်သည်။ ဤ အခြမ်းက မြေကွက် များသည် မူလ က နာယကချုပ် ဗိုလ်မှုးကြီး တင်သိန်းလူ နှင်. သူ. သား အကွက် ၂ ခု ဖြစ်ခဲ.ပြီး သူတို.ကတဆင်. နောက် အခြား ဗိုလ်မှုးကြီး တဦး အား ထပ်မံရောင်းချပြီး၊ သော အခါ အင်ပါယာ သစ် ရထားသည်. ဗိုလ်မှုးကြီး က မြေကွက် ၅ ကွက်စာကို ဘေးချဉ်းယှဉ် ရက် သို.မဟုတ် မျက်နှာခြင်းဆိုင် နေရာများတွင်ရထားသည်။
ဟုတ်ပါ.မလားဆိုပြီး မေးရက်သော သူများ---ဖုံးနံပါတ်ပေးပါ။ရောင်းမကောင်းတဲ. ကျောက်မြက်ခန်းဟောင်းမှာ လုပ်ခဲ.သူတွေ အိမ်လိုက်ပြပေးပါမယ်။ ခရိုနီ ဇော်ဝင်း အိပ်ရာထဲ ကျောကပ်လဲနေတာတောင် လောဘ မသေ လို. ၁၉၉၄ က အလကား အချောင် ရ ထားတဲ. မြေကွက်တွေ ကို သိန်းပေါင်း များစွာ ပေးပြီး နောက်တဦးစီ က ၀ယ်သွားတာ နေ.တနေ.ကပါ။ အိမ် ဖျက်ခံရလို. ဘ၀ပျက် ဆေး ရုံရောက်ခဲ.ရတဲ. အဘတဦး လဲ မသေပဲ ကျန်ခဲ.ပါတယ်။ တောင်နဲ.မြောက်ခြားထားတဲ.ချောင်း ကို တောင်ဖက် တိုးသွားအောင် စစ်တပ်သုံး ချောင်း ကျော ကို ရွှေ.၊ မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာမြေပိုထွက်လာအောင် လုပ်ပြီးမှ၊ ပို ထွက်လာတဲ. ချောင်း တဖက်ခြပမး မြောက်ခြမ်း က မြေ ကွက်တွေကို မြင်.ကို ဆိုတဲ. ခရိုနီ ဒလံက သိန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာနဲ. ရောင်း ခဲ. တဲ. အခါ ၀ယ်ခဲ.တာ က အကောင်ကြီးကြီး တဥိးပါပဲ။ ထရပ်ကားကြီးတွေ ညဖက် အစီးလိုက် လမ်းသွယ်ထဲ ၀င်လာ ရင် လမ်းပြ ပု လိပ်က ကျိုးကျိူး နွံနွံ နဲ. ကူညီ လမ်း ရှင်းပေး ရ တာ မျက်မြင်ပါ။ အော် စီ ကကောလိပ်တွေ ပို.ပေးနေတယ် ဆိုတဲ. ခရိုနီ ရဲ ထွန်း မှန် အိမ် ကြီး က ရတနာ စင်္ကြံန်ကျောင်း ၏ ၀ဲဖက် ကပ်ရက်မှာ ရုံးတွေ ဖွင်. လုပ်စားနေတာ၊ လူနေရပ်ကွက်မှာ စီးပွားမလုပ်ရဆိုတဲ. ပဋ္ဋိဥာဏ် ကို ချိုးဖေါက်နေတာမဟုတ်ပါလား။ ဆွေဇင်ထိုက် အိမ်နဲ. ကျောက်ခန်းဖွင်. အရက်လှောင် တဲ. အိမ် က ကျော ခြင်းကပ်ပဲ။ သွားဆကါသွယ်လိုက်လေ ။ အမကြီး ဆွေဇင်ထိုက် လိုက်မပြရင် ကျမတို. ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြပေးပါ.မယ်။ တရုတ်ကြီး ၀ယ်ထားတဲ. နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နဲ. နိုင်ငံခြားသားတဦးက အဲ ဒီနေရာမှာ အိမ်မြေ ပိုင်ချင်ရင်လွယ်တယ်။ ဒလန်မြင်.ကို ကို ငွေပေးပြီး အိမ်ဖျက်ခိုင်း၊ အိမ်သာပေါက်တွေ ပိတ်။ ရေ မီး ဖြတ်။ လူမနေနိုင်အောင် လုပ်တဲ. အဓမ္မ နည်းတွေသုံးတယ်။ ခရိုနီ ဇော်ဝင်း အာ ရုံ ဦးဆောက်လုပ်ရေးက တကွက်ပြီး တကွက်မူလ နေထိုင်သူများ ပဋ္ဋိဥာဏ်ဖေါက်ဖျက်ပြီး ၄ ကွက် ၅ကွက် ၀ယ်နေတာ ဘယ်သူ. အစွမ်းနဲ.လည်း။ ခရိုနီ တင်.နိုင် စမ်းချောင်းက ၂ ပဲ တပြား သုံးပြီး ၂၀၁၂ ၈ျွန်မှာ မှာ ကြည်.မြင်တိုင်က သူ. နှမတွေ သုံးပြီး သမိုင်း ၀င် အိမ်ကြီးတလုံးကို ၁၇ အီး ( ၁၇ နောက်တဲ.တဲ. က အိမ်ကြီးနဲ. ခြံ) ကို လူအင်အားသုံး အုတ်ပုံဖြစ်သွားအောင် ဖျက်ခဲ.တာ ဗဟန်းမြူနီ စပါယ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေတောင်ရှိတယ်။ ၁၇အီး အိမ်၏ နောက်ဖက် က မတရားမြေပေါ်မှာ ကားဝပ်ရှော. ဖွင်.ထားတဲ. သန်းဝင်းနဲ. တင်.နိုင်.တပည်. မြင်.ကို၊ တင်.နိုင်ပါတနာ ဇော်ဝင်းကို သွားမေးလေ။ တင်.နိုင် သေနတ် ကိုင်မကိုင်။ တင်.နိုင်ဘိန်းချမချ။ အလဲဗင်း က ဂျာနယ်လစ်စ် မလေး ဖုံးနံပါတ်ရော လိုချင်သေးလား။ ဒီသမိုင်းတခုလုံးကိူ သိသူတွေ၊ အားလုံးထင်ရှား ရှိနေတယ်။ ကျမဖုံးနံပါတ်ရောလိုလား။ ဘယ်တော. လိုက်ပြပေးရမလဲ။ ဥပမာ--ဗိုခင်ညွန်.မရီး ဒေါ်စိန်ရီ အကွက်ဟောင်းေ၇ှ.က အကွက်တွေမှာ အရက်လှောင်တဲ.သူတွေကို ပြရင်--ခုမှသိတဲ.သူတွေ ဘာလုပ်ပေးမလဲ။ ဟုတ်ပါ.မလားဆိုတဲ.မေးခွန်းကတော.--ဘယ်သူမှ မမေးသင်.။ ပြောပြနေတာတောင်ရေးရတြဲ. ဂျာနယ်လစ်ရှိပါသလား။ ၊ ဟုတ်လွန်းလို.၊ အာရုံဦးဇော်ဝင်း အိမ်ပဲ လိုက်ပြရမယ်ထင်ပါ.။ ရောဂါတက် အိပ်ရာပေါ်က မထနိုင်တဲ.အာရု့ဦး.ဆောက်လုပ်ရေး ဇော်ဝင်း မိန်းမ နဲ.သမီးကို ၂၃/၁၄-၁၅ က သူတို. ငှားနေတဲ. အိမ်ဝင်းမှာ သွားမေးလေ။ မြူနီစပါယ်ကို ရဲကို ဘယ်လောက်လပ်ထိုးထားလို.၊ ဒီ လို တကွက်ပြီး တကွက် ရလာတဲ. သမိုင်းကိုမေးကြည်.ပါလား။ ဘယ်သူတွေ အဲ ဒီ.မှာ ကျောက်ခန်း အရက်ခန်းဖွင်.ထားတယ် ဆိုတာ။ သွားမေး ရင် --ဟားဟား။ သူတို. ရဲတောင်ခေါ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ. ကျမ အိမ်ပေါက်စေ.လိုက်ပြပေးပါ.မယ်။ မကြောက်လို. သေချာလို.ရေးတာပေါ.။
တရုတ်ကျေးဇူး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကပေါ်တွင် အလွန်ကြီးမား .... ငိငိ
- ရီမြင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး (အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု)
- ဒါရိုက်တာ ထွန်းအောင်ဇော် (အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု)
- နောင်နောင် (အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု)
- မယ်လိုဒီ (အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု)
- မော့စ် (အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု)
- ဟိန်းထက် (လယ်ဝေး) (အကောင်းဆုံးတည်းဖြတ်ဆု)
- ဇော်မျိုးထွဋ် (အကောင်းဆုံးတေးဂီတဆု)
- မြင့်ဆောင်၊ စိုးကျော်ဆန်း (အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆု)
ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးခင်ရွှေ နဲ့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ကော့မှူးမြို့ နယ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြ။ လမ်းများပြုပြင်နေတာကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှူ့
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အကယ်ဒမီဆုရှင်များ
အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရှင် နောင်နောင်(ထာဝရအလင်းတန်းများ)
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ရှင် မယ်လိုဒီ(ထာဝရအလင်းတန်းများ)
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုရှင် ချစ်စနိုးဦး(ထာဝရအလင်းတန်းများ)
ထာဝရအလင်းတန်းများ ဇာတ်ကားဖြင့် အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုရှင် မော့စ်
အကောင်းဆုံး အသံတည်းဖြတ်ဆု အား ဆန်းဦး (ပန်းကြာဝတ်မှုန်)
အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု ကို ဟိန်းထက်(လယ်ဝေး)
အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု - ထာဝရအလင်းတန်းများ ဇာတ်ကားဖြင့် (ရီမြင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)
အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု အား ဒါရိုက်တာ ထွန်းအောင်ဇော်မှ ထာဝရအလင်းတန်းများ
အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆုအား မြင့်ဆောင်နှင့် စိုးကျော်စန်း တို့မှ ထာဝရအလင်းတန်းများ
Credit: The Voice Weekly and The Myanma Age
BY YeYint Nge ... 12/30/20120comment
အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ကေအိုင်အိုနှစ်ဖက် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်
2012-12-29 by RFA news
ကေအိုင်အို ရဲ့ အဓိကစခန်းဖြစ်တဲ့ လဂျားယန်စခန်းကို အစိုးရတပ်က မနေ့က ဂျက်တိုက် လေယာဉ်တွေနဲ့ အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက စပြီး ခြေလျင်တပ် အင်အားအများအပြားနဲ့ ထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် ၇ နာရီလောက်ကနေ စတင်ပြီးတော့ ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်နဲ့ ၇ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ လန်ဂျားယန်စခန်းကို ဒေါ့ဖုန်းယန် အခြေစိုက် အစိုးရ အမြောက်တပ်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်သလို မြေပြင်တပ်တွေကလဲ အများအပြား ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ အတွက် တိုက်ပွဲတွေ အပြင်းအထန်ဖြစ်နေတယ်လို့ အဲဒီ စစ်မြေပြင်မှာ ရောက်နေတဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုလဆိုင်းက ပြောပါတယ်။
“ဒီမနက် ၇ နာရီခွဲ ၈ နာရီလောက်ကနေစတင်ပြီးတော့ သူတို့ခြေလျင်တပ်တွေထိုးတယ် လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ် ထိုးတယ် သူတို့ထိုးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ ၁၂နာရီမိနစ် ၂၀ ၀န်းကျင်မှာ သူတို့တိုက်လေယာဉ်ပြန်လာတယ် ပစ်ကူပေးတယ် အခုတော့ သူတို့လေယာဉ်ပြန်ဆုတ်သွားပြီ လက်နက်ကြီးလှမ်းထုပြီးမှ သူတို့ပြန်ပြီးမှ ထိုးဖို့လိုက်နေကြတယ် အခုတက်လာတဲ့တပ်ကတော့ စကခ ၃ လက်အောက်ခံ ၃၈၁ တစ်ခုတော့ သိလိုက်ရတယ် နောက်ထပ်တော့ မသိရသေးဘူး တခြားတပ်တွေလဲ ပါပါအုံးမယ် ခလရ ၄၀၊ ၃၈၁ ၊ ၃၈၉ တို့ဖြစ်ဖို့များတယ်။”
တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက် ကျဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတော့ အခုအချိန်အထိ မသိရသေးတဲ့ အပြင် အစိုးရတပ်က ဗန်းမော်၊၀ိုင်းမော်နဲ့ရှတန်ပါ ဆိုတဲ့ နေရာတွေကနေ စစ်ကြောင်း ၃ကြောင်းနဲ့ အင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ ကေအိုင်အို စခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ကိုလဆိုင်းက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“နမ့်ဆန်ယန်ဘက်ရယ်၊ ဒေါ့ဖုန်းယန်ဘက်မှာရယ် အခု လက်ဂျားယန်ရယ် ဗဟိုနယ်မြေပေါ့ ၃နေရာကို တခါတည်းသူက ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ အသံတွေကြားနေရတာပေါ့ လက်ဂျားယန်ဘက်ထိုးလာတာကတော့ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းအရဆိုရင် အင်အား ၄၀၀ ကျော် ၅၀၀ ၀န်းကျင်ရှိမယ်ထင်တာပဲ၊ သူတို့ကလဲ မရရအောင်ထိုးစစ်ဆင်နေမဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ”
လန်ဂျားယန်စခန်းကို အခုဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ကတည်းက အစိုးရတပ်က အင်အား ၃၀၀ လောက်နဲ့ တစ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကာလက အကျအဆုံးများများနဲ့ဆုတ်ခွါသွားခဲ့ပြီး အခုတစ်ကြိမ်တော့ တပ်အင်အားတွေ ပိုများလာသလို လေကြောင်းပစ်ကူ တွေပါအသုံးပြုပြီးတော့ တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
လဂျားယန်တပ်စခန်းကျသွားရင်တော့ ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာ ရဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေက စိတ်မချရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစခန်းကျဖို့ဆိုတာ အတော်နဲ့မလွယ်သလို အစိုးရတပ်က အရင်းအနှီးများများပေးရမယ်လို့ နယ်စပ်စစ်ရေးလေ့လာသူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
Coral Arakan News Agency's photo.
24°45′36″N 97°33′48″E ၌ တည်ရှိသော ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာ လိုင်ဇာ (Laiza) ကို ၂၀၁၁-ခုနှစ် မေလ (၂၄)
ရက်နေ့က ကောင်းကင်ပေါ်မှ တွေ့မြင်ရစဉ်။ အ၀ါရောင်မျဉ်းမှာ တရုတ်-မြန်မာ နယ်ခြားမျဉ်းဖြစ်သည်။
ဒီလှိုင်းကိုတစ်ဆင့်မြှင့်ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်ခုလို ထုတ်ချင်
"နောက်ဆိုလို့ရှိ ရင်ကျွန်မတို့က ဒီလှိုင်းကိုတစ်ဆင့်မြှင့်ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်ခုလို ထုတ်စေချင်တာ၊ အခုလည်း ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီလှိုင်းကို သတင်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကလည်း ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကူညီမစမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အများရဲ့ကူညီမစမှုတွေရှိနေမှသာ ဒီလှိုင်းကို စာစောင်အဖြစ်ကနေ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်မှာပါ"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( ဒီလှိုင်းရုံခန်းသစ်ဖွဲ့ပွဲ မိန့်ခွန်းမှ ) (30-12-2012)
တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ ပုလဲသီရိတိုက်ခန်း အမှတ် (၃၆၁) မြေညီထပ်တွင် ပြုလုပ်သော ဒီလှိုင်းစာစောင်၏ ရုံးခန်းပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ပွဲတွင် ယနေ့နံနက် တွေ့ရတဲ့အ မေစု (30-12-2012).
လှေစီး ဘင်္ဂါလီ (၇၀) ရေးမြို့နယ် သို့ ရောက်ရှိ
[ Citizen Journalist Corner / 30 December 2012 / Coral Arakan News]
ဘင်္ဂါလီ(၇၀) လောက်၊(၂၈-၁၂-၂၀၁၂)မှာ ရေးမြို့နယ်၊ အစင်ကျေးရွာအုပ်စု ဓမင်းဆိပ်ကျေးရွာကို ညနေ၀င်ရီတရိုးအချိန်လောက်မှာ ရောက်ချလာတယ်။ ထူးဆန်းတာက သူတို့စီးလာတဲ့လှေကို မတွေ့ရဘူး။
အဲဒီဘင်္ဂါလီတွေကို မေးကြည့်တဲ့သူတွေ ပြောတာက၊ သူတို့စီးလာတဲ့လှေက အခုရှမ်းခန်း(ထိုင်း) ရောက်ပြီ။ မင်းတို့ဆင်းတော့ လို့ပြောလို့ ဆင်းနေကြတယ်လို့ပြောတယ်။ အားလုံးနီးပါးဟာ ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ပြီး၊ အမေ နှင့် သမီးငယ်(၈-၉နှစ်ခန့်) မိန်းခလေး(၂)ဦးပါရှိပါတယ်။ ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားတဲ့ လှေကိုလည်း ဘယ်သူမှ မသိရှိလိုက်ပါဘူး။ သူတို့အပြောအရ လှေပေါ်မှာ နောက်ထပ်လူ(၇၀)လောက်ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်မပြောနဲ့...ကမ်းကပ်တဲ့အထိဝင်လာတာတောင် ရေတပ်က မသိတာအတော်အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ ရေးမြို့နယ်တနယ်လုံးက ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ ပင်လယ်ထွက်ငါးဖမ်းရင် တစီးမကျန်အကုန်သိနေတဲ့ မြန်မာ့ရေတပ်က ဘင်္ဂါလီလှေတစင်းဝင်လာ လူ(၇၀)လောက်ကို ကမ်းမှာချ ပြန်ထွက် လုံးဝမသိဘူးတဲ့ဗျား။ ပြည်သူတွေက ရဲတွေ တပ်တွေကို ဖုန်းနဲ့လှမ်းပြော ဆိုင်ရာက ပြန်အကြောင်းကြားမှ ရေတပ်က လေအဟပ်ခံပြီး သိပါသတဲ့။
တဖက်ကပြန်တွေးကြည့်တော့လဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါးဖမ်းလှေတစင်းထွက်ရင် ဒီဇယ်(၄)ဂါလံ ရတာကိုး။ ဒီဘဂါင်္လီဆိုတော့ အဆင်မသင့်ရင် အိပ်ကပ်ထဲက ပါမှာဆိုတော့....
By Saya Myo Win
[ CJ Corner / 30 December 2012 / Coral Arakan News ]
CJs' Corner သတင်းများကို အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ၏ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုမပါဘဲ မူရင်းရေးသားသူ၏ အာဘော် အတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့၊ ညနေ ၃ နာရီ
BY YeYint Nge ... 12/29/20120comment
မဒေးကျွန်း တရုတ်စီမံကိန်းတွင် အလုပ်သမား အများအပြား အလုပ်ဖြုတ်ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်းတွင် တရုတ်မှ တည်ဆောက်နေသော ရေနံနှင့်် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွင် နေ့စား အလုပ်သမား အများအပြား အလုပ်ဖြုတ်ခံရသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ကျွန်းပေါ်ရှိ ဒေသခံများက သူတို့ကိုသာ အလုပ်ခန့်ရန်နှင့် ပြင်ပမှ လာရောက်သူများကို အလုပ် မခိုင်းရန် တောင်းဆိုရာမှ အလုပ်ဖြုတ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အလုပ်ဖြုတ်ခံရ၍ နေရပ်သို့ ပြန်သူ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ ကိုစိန်သန်းမောင်က ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ အခု မဒေးကျွန်းက အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ အတွက် ကျောက်ဖြူ သင်္ဘောဆိပ်ကို ရောက်နေ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဇွန်လ ကုလား/ရခိုင် အရေးခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အဆင် မပြေ ဖြစ်ပြီး စားဝတ် နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် မိသားစုတွေကို ခေါ်ပြီး အရင် ရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ ဆွေမျိုးတွေ အကူအညီနဲ့ မဒေးကျွန်းမှာ လာအလုပ် လုပ်ပါတယ်။ မဒေးကျွန်းမှာ အလုပ် လုပ်ပြီး စားဝတ် နေရေး အဆင်ပြေနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ကျွန်းပေါ်က ဒေသခံတွေက သူတို့ကိုသာ အလုပ်ပေးရမယ်။ မဟုတ်ရင် ဆန္ဒပြမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အတွက် တရုတ်တွေက ကြောက်ပြီး အပြင်က အလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုသို့ အလုပ်ဖြုတ်ခံရသဖြင့် လူပေါင်း (၁၀၀) ခန့် သည် ယမန်နေ့က ကျောက်ဖြူမှ တဆင့် ၎င်းတို့၏ နေရပ် အသီးသီးသို့ ပြန်သွားကြသည်ဟု ဆိုသည်။
အလုပ်ဖြုတ်ခံရရာတွင် ပါဝင်သူ ပေါက်တောမြို့ ဘ၀မ်းရပ်ကွက်မှ ကိုမောင်လှချေကလည်း အခြေအနေကို ယခုလို ပြောသည်။
“ မဒေးကျွန်းမှာ ရှိတဲ့ သူတွေလည်း ရခိုင်သားတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရခိုင်သားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတွေ အားလုံး အလုပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ မဒေးကျွန်း စီမံကိန်းကို အားကိုးပြီး လာလုပ်တဲ့ ပြင်ပက လူတွေကို ဒေသခံ ကျွန်းပေါ်က လူတွေ အနေနဲ့ အနိုင်ကျင့်တာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အခု အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ အတွက် အလုပ်သမားတွေကို မှီခိုပြီး စားသောက်နေတဲ့ မိသားစု တော်တော်များများ ဒုက္ခရောက်သွားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မဒေးကျွန်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့ နယ်အသီးသီးမှ အလုပ်ကြမ်း လာလုပ်သူ ၈၀၀ ကျော်ရှိပြီး မှီခို နေသူ မိသားစုများနှင့်ပါ ဆိုလျှင် တစ်ထောင်ကျော် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
တရုတ်များမှလည်း အဝေးမှ လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ အများအပြား အလုပ်ဖြုတ်ခံရပြီး လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မူ ရှိသဖြင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြသည်ဟု ကိုမောင်လှချေက ပြောသည်။
မဒေးကျွန်းပေါ်မှ ဒေသခံများသည် သိမ်းဆည်းလယ်မြေများကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း လျော်ကြေးပေးရန်၊ အလုပ်သမားကတ် ရရှိထားသည့် ကျွန်းပေါ်မှ ဒေသခံများ အလုပ်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ မဒေးကျွန်းအနီး ရွာမ၊ ကျောက်တန်း၊ ပိန်းကျေး ရွာချင်းဆက် လမ်းဖောက်လုပ်ပေးရန်၊ လုပ်အားခကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်း အ တိုင်းပေးရန်၊ မဒေးကျွန်းတွင် လူနေအိမ်၊ အဆောက်အဦးများ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ဒေသခံများ လုံခြုံမှုရှိရေးအတွက် သူစိမ်း အလုပ်သမားများကို သေချာ စိစစ်ရန်နှင့် ကျွန်းပတ်လည် တွင် လွတ်လပ်စွာ ရေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်ဆိုသည့် အချက်များကို တောင်းဆိုရန် အတွက် China National Petroleum CorporatioN CNPC ကုမ္ပဏီ ရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။
ကျောက်ဖြူ ခရိုင်အာဏာပိုင်များက အချက် (၅) ချက်ကို လိုက်လျော့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြရန် တောင်းဆိုမူကို ခွင့်ပြုချက် မပေးခဲ့ပေ။ အဆိုပါ နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခြားဒေသက လာရောက် လုပ်ကိုင်သူများကို တရုတ် ကုမ္ပဏီက အလုပ်များ ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မဒေးကျွန်းတွင် တရုတ်က တည်ဆောက်နေသော ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ပုံစံ ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
၀ိုင်းမော်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်းများ၌ လူဦးရေ နှစ်ဆတိုးလာ
ဝိုင်းမော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်း စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းများ တွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေ နှစ်ဆနီးပါး များလာကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမိတ်သစ်များ အဖွဲ့မှ ကိုရှည်ရှည်က ပြောကြားသည်။
“တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ ရက်လောက်က စပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ လူဦးရေတိုးပါတယ်။ ဒီနေ့ထိဆိုရင် ၂ ဆလောက် တိုးလာ တယ်။ အခုလည်း လမ်းမှာ လာနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ ကြားရတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မိုင်းနားကျေးရွာအနီးတွင်ရှိနေသည့် KPC ဒုက္ခ သည်စခန်းတွင် ၅၆၉ ယောက်မှ ၁၀၄၇ ယောက်အထိ တိုးလာ ကြောင်း၊ စိန့်ဂျိုးဆက် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၃၄၅ ယောက်မှ ၈၁၆ ယောက် အထိ တိုးလာကြောင်း သိရသည်။
“ဒုက္ခသည်စခန်းနားတွေမှာပဲ မြန်မာစစ်ကြောင်းတွေ သွားလာနေတာ
တွေ့နေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်နေတဲ့ အချိန်ပဲ ရွာသားတစ်ယောက် သေနတ်မှန်တာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သေတော့မသေဘူးဗျ” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးမိတ်သစ်များ အဖွဲ့မှ ကိုသားငယ် က ပြောကြားသည်။
အသက် ၅၀ ကျော် အမယ်အိုများနှင့် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်တွေ့ရပြီး လူငယ်များနှင့် ယောက်ျားသား များ မတွေ့ရကြောင်း ကိုသားငယ်က၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နမ်ဆမ်ရမ်၊ နမ်ဆော်ရမ်၊ အောင်ကြာရမ်၊ ကဇူရမ်၊ တာပရမ်၊ ဆိုင်းမိုင်၊ ၀မ်သောင်းနှင့် သလောကြီး အစရှိသော ကျေးရွာများမှ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အများဆုံး လာရောက်နေထိုင်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
KPC နှင့် စိန့်ဂျိုးဆက် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် သောက်သုံးရေ ပြဿနာနှင့် အဓိက ရင်ဆိုင်နေရပြီး ၂ မိုင်ခန့်ဝေး သောနေရာတွင် ရေသွားခပ်ရသည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးမိတ်သစ်များ အဖွဲ့က ပြောသည်။
"ဦးပိုင်" "၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ" နှင့် ခေါင်းတလား
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉
လက်ပံတောင်းတောင် အရေး တစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယနေ့ ညနေပိုင်းက ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် ပါဝင်သူအချို့က "ဦးပိုင်" နှင့် "၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ"ဟု စာရေးကပ်ထားသည့် ခေါင်းတလား ၂ ခုအား မြေချကာ၊ ယမမင်းကြီး၏ အမိန့်ကြေညာချက်ကို ရွတ်ဖတ်ဟန် performance ဖြင့် လမ်း ၅၀ ထိပ်ရှိ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်ရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ —
"NLD ပညာရေးကွန်ရက် ၂ နှစ်ပြည့် အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းများရန်ပုံငွေ ပွဲမှ ငွေကျပ်သိန်း ၂၆၅၃ ခန့်ရရှိ"
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ပညာရေးကွန်ရက် (၂)နှစ်ပြည့် ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော်နှင့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ အသားတင် ငွေ ကျပ် ၂၆၅၃ သိန်းခန့်ကျန်ရှိကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောသည်။
ရရှိငွေ စုစုပေါင်းမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၄၆၀၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး၊ကုန်ကျစရိတ် ၁၉၄၇ သိန်း ရှိသောကြောင့် စုစုပေါင်းကျန်ငွေ ၂၆၅၃ သိန်းကျော် ကျန်ရှိကြောင်း၊အဆိုပါငွေတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှတ်တရပစ္စည်း နှစ်ခု အားလေလံပစ်သည့် ငွေပါ ပါဝင်ပြီးလက်ရှိ
တွင် အင်တာနက်နှင့် တယ်လီဖုန်းတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ လှူဒါန်းထားသော ငွေ များစုံလင်စွာရရှိပါက ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယခုရရှိထားသော ငွေများကိုပညာရေးကွန်ရက်မှ ကျောင်းများအပြင်နယ်ကြားဒေသမှပညာရေးကျောင်းများ၊ပြည်တွင်းစစ်
အခက်အခဲကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများရှိရာနေရာများမှ ကျောင်းများ၊ဒုက္ခသည် များရှိရာ ဒေသမှ ကျောင်းငယ်များကို သွားရောက်လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ပညာရေးကွန်ရက် (၂)နှစ်ပြည့် ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲကို ယခုလ ၂၇ ရက်နှင့် ၂၈ ရက် တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြင်းခြံမြို့၊မြောက်ဈေး၊ လမ်းဘေးမှာ မိုးကာတဲလေးနဲ့ မလုံမခြုံနေရရှာတဲ့ မိမိအမည်ကိုတောင်မပြောနိုင်တဲ့ စိတ်ရောဂါရှင်ပါ။ ကလေးလေးမွေးဖွားပြီးးတာ နှစ်ပတ်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဓာတ်ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း မိုးကာတဲလေးက ကလေးငယ်လေးအား အသက်ရှင်ဖို့ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေပါ။ လမ်းဘေးလေးမှာ မလုံမခြုံနေရတာကြောင့် ဈေးသူဈေးသားများလည်း စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကြတယ်။ ကူညီမယ့်သူကိုလည်း မျှော်လင့်နေကြတယ်။ မနက်ပိုင်း နေ့ခင်းပိုင်းမှာ(ဈေးဖွင့်ချိန်မှာ) ၀ိုင်းပြီးကူညီကြ၊ ရိုင်းပင်းကြ၊ ပေးကြ ကမ်းကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မအိဖောင်းက အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ ထမင်းပို့ပေးတယ်။ တဲလေးလုပ်ပေးတယ်။ မွေးဖွားခါနီးမှာ ဆရာဝန်များနဲ့ ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ခက်နေတာက ဈေးသူဈေးသားတွေ မရှိတော့တဲ့ ညဘက်ဆိုရင် မိခင်ရဲ့လုံခြုံရေးကလည်း ရင်လေးစရာပါ။ ကလေးအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ စိတ်ရောဂါရှင်ဟာ လူမဆန်တဲ့လူများကြောင့် ကလေးရခဲ့တာပါ။ လိင်လုပ်သားတစ်ဦးမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောကြပါတယ်။ မြင်းခြံမြို့ ဘူတာဝန်းကျင်မှာ ရောက်နေတာ တစ်နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ စိတ်ရောဂါရှင်ဖြစ်လို့ စိတ်ထင်ရာလျှောက်သွားရင်း မြင်းခြံကိုရောက်လာဟန်တူပါတယ်။ သူမနာမည်ကို အမှန်မပြောနိုင်သေးပါ။ “မမုန်တိုင်း” လို့လဲပြောတယ်။ “မသက်သက်ခိုင်” လို့လဲပြောပါတယ်။ ကလေးဖွားပြီးမှ မိခင်စိတ်ရှိလာတယ်။ စိတ်မှန်စပြုလာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ (အချို့ကလည်း မိုးကုတ်ဘက်ကတဲ့၊ အချို့ကလည်း ပုပ္ပါးဘက်ကတဲ့၊ အချို့က မော်လမြိုင်ဘက်ကတဲ့၊ အမျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်။) သူမအတွက် (ယာယီဖြစ်ဖြစ်) လုံခြုံရာနေရာတစ်ခုရဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
အကယ်၍ facebook မိတ်ဆွေများ သိခဲ့လျှင် သူမမိဘများနဲ့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ နေရာဒေသအတိအကျသိရင် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များနဲ့လည်း ဆက်သွယ်သတင်းပေးကြပါခင်ဗျား-----
အရှင်ဝဏ္ဏိတ၊ အလင်းဥယျာဉ်ပညာရေးကျောင်း၊ ထနောင်းတိုင်
မြန်မာ့ အာမခံ လုပ်ငန်းက သေဆုံးသူ ဦးပြား ဆိုင်ကယ်သည် လိုင်စင်မဲ့ ဟုတ်၊မဟုတ် စစ်ဆေး
လေယာဉ် ပျက်ကျမှုကြောင့် သေဆုံးသူ နှစ်ဦး အာမခံ လျော်ကြေးပေးမည်
ဟဲဟိုး လေဆိပ် အဆင်းတွင် ပျက်ကျခဲ့သည့် အဲပုဂံ လေယာဉ် ပျက်ကျမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူ နှစ်ဦး အတွက် လျော်ကြေးငွေများ ပေးအပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ အာမခံ လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးအေးမင်းသိန်းက ပြောကြားသည်။
လေယာဉ် ပျက်ကျမှု ကြောင့် သေဆုံး ခဲ့သည့် ခရီးသွား လမ်းညွှန် ဒေါ်နွယ်လင်းရှိန် အတွက် ခရီးသွား အာမခံကြေး သိန်း ၅၀ ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ဖြင့် ဆိုင်ကယ်ကို တိုက်မိ သေဆုံးသူ ဦးပြား အ တွက်မူ Third Party Insurance ကြေး ၅ သိန်း ကို ခံစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း က ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့ အာမခံ လုပ်ငန်းက သေဆုံးသူ ဦးပြား အတွက် Third Party Insurance ကြေး ၅ သိန်း ကို ပေးအပ် နိုင်ရန် သေဆုံးသူ ဦးပြား စီးလာသော မော်တော် ဆိုင်ကယ်သည် လိုင်စင်မဲ့ ဟုတ်၊မဟုတ် ကို စစ်ဆေးရန် လို အပ် နေသေးကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာ့ အာမခံ လုပ်ငန်းသည် လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များ အတွက် ခရီးသွား အာမခံ လက်မှတ် တစ် စောင်လျင် ကျပ် ၅၀၀ ဖြင့် ရောင်းချပေးလျက် ရှိပြီး အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ခု ကြောင့် အသက် သေဆုံး ခဲ့လျင် အာမခံ လျော်ကြေး ကျပ်သိန်း ၅၀ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာ ရရှိသူများ အတွက်မှု အာမခံတွင် အကျုံး မဝင်ဘဲ ကုမ္ပဏီ နှင့်သာ သက်ဆိုင် ကြောင်း မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်း ထံမှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။
နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးငယ်စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ဟာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ဆေးကျောင်းသူဟာ စနေနေ့ မနက်ပိုင်းက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ Mount Elizabeth ဆေးရုံရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အသက်ရှု အထောက်အပံ့ အမြင့်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ပဋိဇီဝ ဆေးဝါးတွေ၊ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်တာကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် ခွန်အားပြည့်ဆေးတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေက အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ Mount Elizabeth ဆေးရုံ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာ ကယ်ဗင်န် လို (Kevin Loh) က ပြောပါတယ်။
အမည် ထုတ်ဖော်ပြောမထားတဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ သူ့ဘေးနားမှာ ရှိနေကြတယ်လို့လည်း ဒေါက်တာလိုက ပြောပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ အမျိုးသားအဖော်တဦးနဲ့အတူ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ခရီးသွား နေချိန် ကားပေါ်ပါလာတဲ့ တခြား အမျိုးသားအုပ်စုတစုက သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကို သံတုတ်နဲ့ရိုက်၊ အမျိုးသမီးငယ်ကို မုဒိန်း ကျင့်ပြီး ဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေ ပစ်ချခဲ့တာပါ။
မုဒိန်းကျင့်ပြီး လူသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့ စွပ်စွဲပြီးတော့ သံသယရှိသူ ခြောက်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ သူ့ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အိန္ဒိယကနေ စင်္ကာပူနိုင်ငံဆီ လေကြောင်းခရီးနဲ့ ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီလုပ်ရပ်အပေါ် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ ဆေးဘက် ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြစ်တင် ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
by Aungmyo Tun
BY YeYint Nge ... 12/28/20120comment
တရုတ်သံရုံးနား ဆန္ဒပြသူတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေး
RFA Burmese's photo.
တရုတ်သံရုံးနား ဆန္ဒပြသူတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေး လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာတော်တွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့က တရုတ်သံရုံးနားအထိ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုမိုးသွေး၊ ကိုအောင်မျိုးဦး ၊ မသန္တာတို့အပါအ၀င် (၆) ဦးကို ကြည့်မြင်တိုင် နဲ့ အလုံမြို့နယ် တရားရုံးတွေမှာ ဒီကနေ့ ပထမအကြိမ် တရားရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ( ၆ )ဦးဟာ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ အလုံ၊ စမ်းချောင်း၊ ဒဂုံ အစရှိတဲ့ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေက တရားမ၀င် စီတန်းလှည့်လည်မှုအရ ပုဒ်မ (၁၈)နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းမှာ အလုံမြို့နယ်နဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တရားရုံးတွေက တရားစွဲဆိုခံထားရသူ တစ်ဦးကို ကျပ် ၃ သိန်းစီ စုစုပေါင်း ကျပ် ၆ သိန်းနဲ့ အာမခံကြေး ပေးဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ တရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေထဲက ကိုအောင်မျိုးဦးက RFA ကို ပြောပြပါတယ်။ မြို့နယ် လေးမြို့နယ်ကနေ တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ ကိုဒီငြိမ်းလင်း အပါအ၀င် ၆ ဦးကို ရှေ့နေများ ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင် တွေက ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းခေါ်ဆိုမှုမှာ တရားရုံးနှစ်ခုစလုံးက မနက် ( ၁၀) နာရီ တပြိုင်တည်း ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အတွက် တရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေ အခက်အခဲ ဖြစ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာတော်တွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့က တရုတ်သံရုံးနားအထိ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုမိုးသွေး၊ ကိုအောင်မျိုးဦး ၊ မသန္တာတို့အပါအ၀င် (၆) ဦးကို ကြည့်မြင်တိုင် နဲ့ အလုံမြို့နယ် တရားရုံးတွေမှာ ဒီကနေ့ ပထမအကြိမ် တရားရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ( ၆ )ဦးဟာ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ အလုံ၊ စမ်းချောင်း၊ ဒဂုံ အစရှိတဲ့ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေက တရားမ၀င် စီတန်းလှည့်လည်မှုအရ ပုဒ်မ (၁၈)နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းမှာ အလုံမြို့နယ်နဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တရားရုံးတွေက တရားစွဲဆိုခံထားရသူ တစ်ဦးကို ကျပ် ၃ သိန်းစီ စုစုပေါင်း ကျပ် ၆ သိန်းနဲ့ အာမခံကြေး ပေးဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ တရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေထဲက ကိုအောင်မျိုးဦးက RFA ကို ပြောပြပါတယ်။
မြို့နယ် လေးမြို့နယ်ကနေ တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ ကိုဒီငြိမ်းလင်း အပါအ၀င် ၆ ဦးကို ရှေ့နေများ ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင် တွေက ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းခေါ်ဆိုမှုမှာ တရားရုံးနှစ်ခုစလုံးက မနက် ( ၁၀) နာရီ တပြိုင်တည်း ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အတွက် တရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေ အခက်အခဲ ဖြစ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(အောက်တွင် ဖေါ်ပြမည့် အကြောင်းအရာများသည် အသက် ၁၈နှစ် ပြည့်မှ ဖတ်သင့်သည့် အပြင် ဖေါ်ပြမည့် အကြောင်းအရာကို လိုက်၍ ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ယူဆနိုင်သော စာသားများ ပါဝင်နိုင်သဖြင့် မဖတ်ရှုလိုသူများ ဤနေရာမှ စတင်၍ ရပ်တန့်နိုင်ကြောင်း သတိပေးပါသည်)
၁။ အမျိုးသမီး လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးမှ နိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဥပဒေရှိသင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းမည်ဟု ကြားသိရသောအခါ ထုံးစံအတိုင်းပင် ကန့်ကွက်သံ၊ လက်ခုံပ်သံ တဝေေ၀ ကြားရပါသည်။ ခံစားချက်ကို အဓိကထား ပြောနေသည်ကများပါသည်။ ခံစားချက်ကို ဘေးဖယ်၍ ပြောပြချင်သည်များရှိလာသည်။
၂။ ပြည့်တန်ဆာဟု ခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိန်းမရွှင်ဟု ခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ လိင်လုပ်သားဟု ခေါ်သည်ဖြစ်စေ အမှန်စင်စစ် “ဖာ” ပင်ဖြစ်သည်။ (စကားရိုင်းလျှင်သည်းခံပါ၊ ဆက်ရှင်းပါမည်) အခေါ်အဝေါ်က စကားပြောပါသည်။ ဖာကို ဖာဟု မခေါ်ပဲ လိင်လုပ်သားဟု ခေါ်သောအခါ တမျိုးသော ဂုဏ်ရှိနေသယောင်ထင်နေရသည်။ (ဂုဏ်မရှိဟု ပြောခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ၊ ပုဂ္ဂလအစွဲကြောင့် ခံစားချက်ပြောင်းသွားတတ်ကြောင်း ပြောလိုရင်း ဖြစ်သည်။) ကေတီဗီမှာ အဆိုတော်လုပ်သည်ဟု နာမည်တတ်ထားသော မိန်းကလေးများကို ဖာဟု ခေါ်သော အခါ ဆတ်ဆတ်ခါ နာပါလိမ့်မည်။ ထို အနာသည်လည်း ထိုဘ၀မှ ရုန်းထွက်ရန် တွန်းအား တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုအလုပ်ကို တရားဝင်ရေးမ၀င်ရေးထက် “ဖာ” ဟူသော စကားကိုပင် နှုတ်မှ မထွက်ရဲသော အမျိုးကောင်း သမီးငယ်များ ရှိနေကြောင်း ထင်ရှားစေရန် ဖြစ်သည်။ ယခုစာသည် ထိုဖာများကို တရားဝင်သင့် မ၀င်သင့်ထက် တွေးတောထိုက်ဖွယ်ရာများကို ပြောပြရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ လက်ခံလိုသူတို့ကမူ အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြကြသည်။ ပြည့်တန်ဆာသည် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပင် ရှိခဲ့ကြောင်း (ဘုရားရှင်နှင့် လောကီရေး မဆိုင်ပါ၊ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် သူခိုးလည်းရှိပါသည်၊ မည်သည့်လက်ထက်တွင်မဆို ပြည့်တန်ဆာရှိပါသည်၊ ရှိတိုင်း လက်ခံရန်မလိုပါ) တိုင်းပြည်ကို အလှတန်ဆာဆင်ပေးသဖြင့် ပြည့်တန်ဆာဟုခေါ်ကြောင်း (မည်သို့နာမည်တတ်တတ်၊ ဖာသည်ဖာပင်ဖြစ်သည်) တရားဝင် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ရဲများကို လိုင်းကြေး ဆတ်ကြေးပေးရခြင်းမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြောင်း၊ ဆေးစစ်ချက်များ လုပ်နိုင်သဖြင့် စိတ်ချရကြောင်း များ ပြောပြကြပါသည်။ (ထိုကိစ္စများကိုလည်း ရှင်းရပါမည်၊ ခဏသည်းခံပါ)
၄။ ကလေးပြော ပြောလိုက်လျှင်မူ ကိစ္စပြတ်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာ ကိစ္စ တရားဝင်ရေး သဘောတူသူများသည် မိမိမိတ်ဆွေများကို “ငါ့ညီမကတော့ လိုင်စင်ရဖာကွ” ဟု ပြောရဲပါမည်လား။ ကိုယ့်အမျိုးထဲတွင် တရားဝင် ဖာခန်းထောင်သူများရှိလျှင် သဘောတူမည်လား။ မိုက်ရိုင်းချင်၍ မဟုတ်ပါ။ လူဆိုသည်မှာ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသော ကြိုးကို ဆွဲလှုပ်မှ နာချင်သည်။ ဖာများကို မသနား၍ မဟုတ်ပါ။ သနားသည်နှင့် တရားဝင်လုပ်ကာ သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးရန်လည်း မလိုပါ။ ဖခင်နဖူးမှ ခြင်ကို ရဲတင်းနှင့် ထုသတ်သော စေတနာကို စေတနာဟု မသတ်မှတ်လိုပါ။ စေတနာကို ပညာတွဲမှ သာဓုခေါ်ရပါမည်။
၅။ ပြည့်တန်ဆာ ကိစ္စကို အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် သုံးမျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၁) ပြစ်မှု အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း Criminalisation ၊ ၂) ဥပဒေဘောင်အတွင်း ကန့်သတ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း Legalisation ၊ ၃) ပြစ်မှုအဖြစ် လုံးဝ မသတ်မှတ်တော့ခြင်း Decriminalisation တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတိုင်း ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို တရားဝင် ခွင့်ပြုသည်မဟုတ်ပါ။ အထက်ပါ သုံးမျိုးကို နိုင်ငံအလိုက် ဆောင်ရွက်ကြသလို နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းရှိ ဒေသအလိုက်ဆောင်ရွက်ကြ၊ ငြင်းပယ်ကြ၊ လက်ခံကြသည်လည်း ရှိပါသည်။
၆။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ပြစ်မှုဘောင်အတွင်း သွတ်သွင်းရာတွင်လည်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အလုံးစုံသော လိင်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စမှန်သမျှ တားမြစ်ခြင်း Prohibitionist နှင့် လိင်အရောင်းအ၀ယ်ကို ခွင့်ပြုပြီး ကျန်ဆက်စပ်သမျှတားမြစ်ခြင်း Abolitionist (ဥပမာ- အများပြည်သူနေရာလိင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ မြူဆွယ်ခြင်း၊ ဇိမ်နန်းထောင်ခြင်း) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြောနေကြသူများသည် ဥပဒေအတွင်းမှ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းကို တောင်းဆိုနေသည်ဟု ယူဆသည့် အလျောက် ထိုကိစ္စကို အသေးစိတ်ပါမည်။
၇။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက်သောအခါ တရားဝင်စေရန် လုပ်ရသော ကိစ္စများ ပါလာပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လိုင်စင်ချပေးခြင်း၊ မစစ်မနေရ ဆေးစစ်စေခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖာများသည် များသောအားဖြင့် နယ်လှည့်လိင်လုပ်သားများ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေရာတွင် ကြာရှည်နေလျှင် ဖောက်သည်ရသည်ဟု ယူဆနိုင်သော သာမန်အရောင်း အ၀ယ်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ နေရာသစ်မှ လူအသစ်ဟုထင်ကြပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ဝယ် သက်တမ်းရင့်နေသော ပြည့်တန်ဆာကို မည်သူမှ ငှားရမ်းပျော်ပါးလိုမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုပြည့်တန်ဆာများအား တရားဝင် မှတ်ပုံတင်လာမည်ဟု ထင်လျှင်ထိုင်စောင့်ပါ။ မလာပါ။ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းကိုလည်း တစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ပါမည်လား။ သံသယရှိရပါသည်။ ဆေးမအောင်လျှင်လည်း “ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်” လုပ်စားမည်လား။ တရားဝင်ဖာမှာ တရားမ၀င်ဖာအဖြစ် ပြောင်းသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါမည်။ အသက်မပြည့်၍ မှတ်ပုံတင်မလုပ်ရသော ပြည့်တန်ဆာသည် ထိုအလုပ်ကို အသက်ပြည့်သည် အထိ စောင့်နေမည်လား။
၈။ နောက်တစ်ချက်သည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ရာဇ၀တ်မှု လျော့ကျနိုင်သည် ဆိုသော အကောက်အယူဖြစ်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုတွင် အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ရဲကြေးပေးရခြင်း၊ ကလေးပြည့်တန်ဆာ၊ လူကုန်ကူးမှု စသည်တို့ လျော့ကျမည်ဟု ဆြိုခင်းဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်သဘောကို နားမလည်၍ ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်ငယ်ကိုမှ တပ်မက်သူ၊ အပျိုဘ၀ ၀ယ်လိုသူ (ကန်တော့ပါသည်၊ မရှင်းမည်စိုး၍ ရိုင်းရိုင်းဆိုပါမည်၊ ပါကင်ဖောက်လိုသူ) စသည်တို့ရှိနေလျှင် မှောင်ခိုဈေးကွက်ရှိနေမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရှိနေလျှင် ရဲအဂတိကိစ္စ ရှိနေဦးမည်သာဖြစ်သည်။ ရဲများ ရဲကြေးတောင်းသည်ကို ပပျောက်ရန် ပြည့်တန်ဆာ တရားဝင်ရေးလုပ်မည်လား၊ ရဲအဂတိလိုက်စားမှု ပပျောက်ရေးလုပ်ရမည်လား ရှင်းအောင်တွေးစေချင်ပါသည်။ ရဲကမူ ဖာကြေး မရလျှင် နှစ်လုံးသုံးလုံးသမားဆီမှတောင်းပါမည်။
၉။ လိင်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စသည် ရောင်းသူဝယ်သူ နှစ်ဦးတည်းသာ ရှိသော ကိစ္စလို မရိုးရှင်းပါ။ တတိယလူ အမြဲလိုလိုရှိပါသည်။ ထို ပြည့်တန်ဆာများကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေသော ဇိမ်ခေါင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေါင်းများသည် များသော အားဖြင့် လူဆိုးလူမိုက်များဖြစ်ကြပါသည်။ တရားဝင်ဖြစ်လာသော ပြည်တန်ဆာကိစ္စများတွင် ထို မန်နေဂျာများ တရားဝင် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်နိုင်ခြေ ပိုများလာပါမည်။ ပြည့်တန်ဆာများကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ပချုပ်ဆိုင်ထောင်ခြင်း၊ အတင်းအကြပ် ဖာဇာတ်သွင်းခြင်းတို့ကို တရားဝင်လုပ်လာနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ပြီးလျှင် မျက်စေ့မှိတ်သည်က များပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာနွံသည် ရုန်းထွက်ရန် ခက်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ဥပဒေပြုလျှင် ထို ဖာခေါင်းများအတွက် ဥပဒေ ထပ်၍ ပြုရပါသည်။ နိုင်ငံတကာကို ကြည့်စေချင်ပါသည်။
၁၀။ နေရာကိစ္စသည်လည်း စဉ်းစားစရာ ကိစ္စ ဖြစ်လာပါမည်။ လမ်းပေါ်မှ ဖာများအတွက် မြူဆွယ်ရန် နေရာ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ တွေ့ရာတွင် မြူဆွယ်၍ မရပါ။ ဇိမ်နန်းထောင်ရာတွင်လည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရပ်ဒေသရှိ အမျိုးကောင်း သားသမီးများ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရန် သီးသန့်နေရာ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ ထို့အပြင် အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော နေရာများတွင် လိင်အရောင်း အ၀ယ်လုပ်ခြင်း soliciting ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရပါမည်။ မည်သူသည် မိမိနေရပ်ကို တရားဝင် ဖာအရပ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုပါမည်နည်း။ ပြည့်တန်ဆာ ဥပဒေကို လက်ခံလျှင် ထိုကိစ္စများကို ထည့်သွင်း ခွင်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ တံခါးပေါက်မှာ မြူဆွယ်ခွင့်၊ လမ်းပေါ်တွင် မြူဆွယ်ခွင့်၊ အိမ်သို့ အလုပ်သို့ ဖာခေါ်ခွင့်၊ ဇိမ်နန်းထောင်ခွင့် စသဖြင့် ပါဝင်လာပါမည်။ သားပျိုသမီးပျိုရှိသော အိမ်ရှေ့တွင် ပချုပ်ဆိုင်ထောင်သည်ကို မည်သည့်ဖခင်က လက်ခံလိုပါမည်နည်း။
၁၁။ ထပ်မံစဉ်းစားစရာကိစ္စသည် ဥပဒေ အသက်ဝင်ခြင်း ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်အရက်များကို ၁၈နှစ် မကျော်သူများအား မရောင်းရန် ဥပဒေရှိပါသည်။ အားလုံးလိုလို မလိုက်နာပါ။ ထိုသို့ ထိန်းညှိရန် အဖွဲ့ အစည်း အားကောင်းမှု မရှိပဲ တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက်လျှင် အာဏာဖြင့် ထိန်းချုပ်၍ ရသော ဘ၀မှ ထိန်းချုပ်ရန် အခွင့်အာဏာ ပင်ပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ဘာနှင့်မှ ကိုင်တွယ်မရပဲ လူကုန်ကူးမှု၊ ကလေးပြည့်တန်ဆာအမှုတို့ တရားဝင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ တရားဝင်လာလျှင် မှောင်ခိုပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို မည်သူကိုင်တွယ်မည်နည်း။ ရဲများကမူ ဖာကြေးကောက်ရသည့် အရသာကို သိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်းသည် လူထုအတွင်း လိင်မှုရောဂါများကူးစက်မှုကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူထုကို ဦးတည်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ပြစ်မှုအဖြစ်မှ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးတည်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးထောင့်မှ ကြည့်သူများသည် ပြည့်တန်ဆာအမှုကို သာမန်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စ အဖြစ် ဥပဒေလုပ်ရန်မလိုပဲ ရှိရင်းစွဲ တားမြစ်ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ရုံသာရှိပါသည်။ ထိုအထိ လုပ်ရဲပါမည်လား။ ဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ်လျှင်လည်း ပြည့်တန်ဆာများကို အန္တရာယ်ရှိသော လိင်ကိစ္စများအကြောင်း သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆာတီဖီကိတ် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၁၃။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပါသော်လည်း ပြည့်တန်ဆာကို ဥပဒေဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း၏ အကျိုးရလာဒ်ကို သိသာထင်ရှားစွာ မတွေ့ရကြောင်း သူရို့ ၀န်ခံကြပါသည်။ ၁) ရလာဒ်ကို သုတေသနပြုမှု၊ စောင့်ကြည့် အဆင့်မြှင့်ပေးမှု နည်းပါးခြင်းLittle evaluative research ၊ ၂) ဥပဒေဘောင်ဖြင့် ချဉ်းကပ်နည်းများ အတိုးအလျော့ လုပ်ရန်လွယ်ခြင်းVariations in legal frameworks within approaches ၊ ၃) အစီရင်ခံစားများ၏ ရလာဒ်ကို တိုင်းတာတွက်ချက်ရန် ခဲယဉ်းခြင်းValidity of reports ၊ ၄) အငြင်းပွားဖွယ်ရလာဒ်များရှိခြင်း Conflicting results (ဘာသာရေးသမားတို့က သိပ်များနေပြီထင်မည်၊ လူ့အခွင့်အရေးသမားက လိုသေးသည်ထင်မည်) တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ အဆုံးသတ်ပြောရလျှင် ဖူကူယားမား၏ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး စာအုပ်မှ အမှတ်ရမိသည်ကို ပြောပြလိုပါသည်။ ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရာတွင် ယဉ်ကျေးမှုဖက်တာသည် ရွေ့ပြောင်းရ အလွန်ခက်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ယဉ်ကျေးမှုဖက်တာပေါ်တင်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ (ယဉ်ကျေးမှုကို အကြောင်းပြ၍ ငြင်းခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ပြည်သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်လက်ခံသော သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်သော ဓလေ့အပေါ်တင်ကြည့်စေရန် ဆိုလိုပါသည်။ ပြည်သူတို့ အလွယ်တကူ ခေါင်းငြိမ့်မည်လော၊ ငြင်းပယ်မည်လော ဆိုသည်ကို စဉ်းစားရန် ဖြစ်ပါသည်) ထိုအလုပ်ကို မဆိုထားနှင့်၊ ဖာဟူသောစကားကိုပင် နှုတ်က မထွက်ရဲသူများရှိကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
၁၅။ သူရို့ဆီမှာ၊ သူရို့ဆီမှာနှင့် လွယ်လင့်တကူ ဒီမိုကို ကရေစီပြသူများ စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ သူရို့ဆီမှာတိုင်း ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကို လက်ခံကြသည်မဟုတ်ပါ။ တားမြစ်သောနိုင်ငံများစွာရှိပါသည်။ ကိုယ့်အခြေအနေကို မသုံးသပ်ပဲ လွယ်လင့်တကူ တင်သွင်းလို၍ မရပါ။ သူ့ရေမြေမှာပေါက်တိုင်း ကိုယ့်ရေမြေနှင့် အံမ၀င်ပါ။ (ယခုစာစုတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အကြောင်းပြ၍ မငြင်းခဲ့ပါ၊ ) ဆင်ခြင်တုံတရားကို သုံး၍ သုံးသပ်စေလိုပါသည်ခင်ဗျား။
၁၆။ ထို့ထက်ပို၍ ဆိုရန် မရှိပါ။
ဆရာဦးမောင်မောင်မြင့်မှ ဖုံးဆက်၍ ဆွေးနွေး အားပေးသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ ဆရာပြောသော ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများကို (နားလည်သမျှ) တင်ပေးပါမည်။
(၁) ပြည့်တန်ဆာကိစ္စသည် ပပျောက်ရန် လုပ်မရပါ။ ပပျောက်ရန် လုပ်မရ၍ တရားဝင်လုပ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ် ဖြေရှင်းခြင်းကိုသာ ကာယကံရှင်များက ပိုသဘောကျပါသည်။ တရားဝင်ဖာအဖြစ်ရပ်တည်ရန်သည် နောင်ရေးရှိပါသေးသည်။ အသက်ကြီးလာလျှင် မိသားစုနှင့် နေချင်ကြပါလိမ့်မည်။ မည်သူမှ ထာဝစဉ်ဖာလုပ်မရပါ။ ဖာမှတ်ပုံတင်ထားလျှင် အသက်ကြီးလျှင် ခေါင်းဖြစ်သွားပါမည်။ မှတ်ပုံမတင်လျှင် မသိလိုက် မသိဘာသာ စွန့်ခွာ၍ ရနိုင်ပါသည်။
(၂) ဆရာပြောပြသော ဥပမာလေး အလွန်ကောင်းပါသည်။ အမိန့်ရ အပေါင်ဆိုင်သည် အပေါင်ဆိုင် သတ်သတ်လုပ်ပါက မည်သူမှ မ၀င်လိုပါ။ (ဆိုင်ထဲဝင်လျှင် ပေါင်ရန်မှန်း လူတိုင်း သိပါသည်) အပေါင်ဆိုင်ကို စတိုးဆိုင်လေးနှင့် တွဲဖွင့်ပါမှ ပစ္စည်းလေး တစ်ခုခု ၀ယ်သလိုနှင့် ၀င်ပေါင်ပါသည်။ ကေတီဗီအဆိုတော်လုပ်ခြင်းသည် ထိုသို့ သဘောပါနေပါသည်။ ဖာများမှတ်ပုံတင်မည်မဟုတ်ပါ။ မတင်မည့်အတူတူ အခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖာကိစ္စ ပပျောက်ရန် ကြိုးစားစေချင်ပါသည်။
(၃) ဖာထက် အရေးကြီးသည်မှာ ချုပ်ထားသော ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က ဖာများကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ဇိမ်ခန်းထောင်ခြင်း၊ ဖာဇာတ်သွင်းခြင်းများ လုပ်ပါသည်။ ဖာကိုဖမ်းသဖြင့် ပြဿနာ မပြေလည်ပါ။ အညှာက ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဖာများကို ကယ်လိုလျှင် ခေါင်းကို အားပေးသော ဥပဒေပြုရေးထက် သူတို့ကို အရေးယူနိုင်ရန်သာ ကြိုးစားစေချင်ပါသည်။
Share from FB
အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးကကျပ်သိန်း ပေါင်း ၆၃၀ ပေးဝယ်
ကြိုးကိုင်သူ မောင်တော ဒေါက်တာထွန်းအောင်၏ ကွန်ရက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်
Coral Arakan News Agency
ဓါတ်ပုံ- ဒေါက်တာထွန်းအောင်၏ သမီး သီရိရွှေစင်အောင် အား မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မဟာသီယာမိုဟာမက် နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်။
ကြိုးကိုင်သူ မောင်တော ဒေါက်တာထွန်းအောင်၏ ကွန်ရက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပုံရ
By Thaung Kwre
စစ်တွေ ၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်းသုံးသပ်ချက် ]
ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၈)ရက်နေ့ မောင်တောမြို့ ဘင်္ဂါလီအချိန်ကိုက် အုံကြွမှုတွင် နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူ အဖြစ် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ဒေါက်တာထွန်းအောင် ၏ သမီးထွေး သီရိရွှေစင်အောင် (ခေါ်) Aishah Ma နှင့် ခေတ်သစ်မူဆလင်ဝါဒီ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာမဟာသီယာမိုဟာမက် တို့ ပူးတွဲရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ပေါ်ထွက်လာရာ ဒေါက်တာထွန်းအောင်တို့မိသားစု၏ ကွန်ရက်မှာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ ရှိနေခဲ့ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မှန်းဆချက်များ ပေါ်ထွက်လာကြသည်။
တရုတ်ပြည်ပေါက် မူဆလင်တစ်ဦး လက်ထပ်ကာ မလေးရှားတွင် နေထိုင်သူ သီရိရွှေစင်အောင် (၂၆-နှစ်) မှာ ပန်တနော်သူ မိခင် နှင့် မောင်တော ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ဒေါက်တာထွန်းအောင်တို့၏ အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။
မိခင်ဖြစ်သူ၏ လူမျိုးသွေးကို ရှမ်းလော တရုတ်လော ကရင်လော ဟု Coral Arakan က သဲသဲကွဲကွဲမသိရသေးသော်လည်း၊ မိခင်မှာ ထွန်းအောင်ကို ရခိုင်လူမျိုးဆိုပြီး ချစ်ကြိုက်ညားခဲ့ ပြီးမှ ဘင်္ဂါလီမှန်း မူဆလင်မှန်း သိရခြင်းဖြစ်သည် ဟု တချို့က ဆိုကြသည်။ လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မူဆလင်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
သီရိမှာ ၄င်း၏ မူဆလင်ကွန်ရက်မှ တစ်ဆင့် ဖခင်လွတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီး၊ တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူးလ်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ကွန်ဖရင့် တစ်ခုတွင် ၄င်း၏ ဖခင် ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကို မီဒီယာတွင် ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိအောင် မြန်မာအစိုးရက သက်သက်မဲ့ ရမယ်ရှာကာ ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု တက်ရောက်သူများအား တင်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် တစ်ဘက်က ထွန်းအောင်၏ မိသားစုက ထွန်းအောင်မှာ ကျန်းမာရေး အလွန်အမင်း ချို့တဲ့နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ ထွန်းအောင်(၆၅-နှစ်)အား လွှတ်ပေးရန် အသနားခံစာတင်ပြထားကြသည် ဟု ဆိုသည်။
ဒေါက်တာထွန်းအောင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မူဆလင်ကမ္ဘာ၊ OIC ၊ ယူအန် ၊ အန်ဂျီအိုများ၊ မီဒီယာ စသည့်အင်အားများအားလုံးကို တွဲလက်ချိတ်ကာကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်းကို အစ္စတန်ဘူးလ် ကွန်ဖရင့်စ်တွင် သီရိ က တင်ပြခဲ့သည်။
၄င်း၏ အစ်မ မြန္ဒာအောင် နှင့် ခဲအို မောင်မောင်သန်းတို့မှာ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့က ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကို ဘင်္ဂါလီဆူပူမှုဖြစ်ခါစ ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၁၁)ရက်နေ့တွင် ၄င်းခိုလှုံနေသည့် မောင်တော UNHCR ရုံးအတွင်းမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၊ ဒေါ်မြန္ဒာအောင်ကိုမူ ရန်ကုန်သို့အသွား စစ်တွေလေဆိပ်တွင် စတင်တားဆီးမေးမြန်းကာ ၄င်း၏ခင်ပွန်းနှင့်တကွ ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
မြန္ဒာအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံအား အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ (ခ)၊ အရေးပေါ် စီမံမှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅(ဃ)/၅(၃၁) တို့ အပြင် လိမ်လည်မှုပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၈ တို့ဖြင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရဲစခန်းက တရားလိုပြု အမှုဖွင့်ခဲ့သည်။
ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများအား မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ရရှိနိုင်ရေးတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသည့် UNHCR ၏ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်မြန္ဒာအောင်သည် နိုင်ငံမဲ့သူများ (stateless people) အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မလေးရှား ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီယား အစရှိသည့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ဇွန်လ ဘင်္ဂါလီဆူပူမှု ဖြစ်ခါနီးဆဲဆဲ မောင်တောမြို့မှဝေးလံသောနေရာများမှ ဘင်္ဂါလီများ ကြိုတင်လာရောက် စုရုံးနေကြပြီးဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ဒေါက်တာထွန်းအောင်က ဇွန်လ(၈)ရက် သောကြာနေ့တွင် စုပေါင်း ဗလီတက်ဝတ်ပြု ဆုတောင်းခွင့် ပြုပေးသင့်ကြောင်း ဒေသအာဏာပိုင်များထံတောင်းဆိုခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
ထို့နေ့ နေ့လယ် မောင်တောမြို့လယ် ဗလီတွင် ၀တ်ပြုရန်လာသူ ဘင်္ဂါလီများလျှံကျထွက်လာပြီးနောက် မောင်တောမြို့အနှံ့ နှင့် နယ်ဘက်တွင် မူဆလင်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူ ရခိုင် ဗမာ တိုင်းရင်းသားတို့အား ဘင်္ဂါလီတို့က တစ်ပြိုင်နက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ နှင့် အလွန် နီးစပ်မှုရှိသူ၊ အခင်းဖြစ်သည့်နေ့ရက်များ တွင် မောင်တောတွင်ရှိနေခဲ့သူ ဒေါ်မြန္ဒာအောင် သည်လည်း နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အခန်းကဏ္ဍများတွင် သေချာပေါက် ပါဝင် နေခဲ့နိုင် သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက သုံးသပ်သည့်အတွက် ဒေါ်မြန္ဒာအောင်အား ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုကြသည်။
ထို့အပြင် ဤ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၈)ရက် ချိန်သားကိုက်လုပ်ကြံမှုကြီးကဲ့သို့သော အလားတူ လုပ်ကြံမှုကြီး တစ်ခုလည်း ၁၉၈၈-ခုနှစ် မေလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာ၊ ထိုအချိန်ကလည်း ဒေါက်တာထွန်းအောင်မှာ မောင်တော ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရှိနေခဲ့သည်။
ထို ၁၉၈၈ မေလ(၁၃)ရက်နေ့ ဖြစ်ရပ်တွင် မောင်တောဒေသနေတိုင်ရင်းသားများမှာ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အမှတ်(၂)လုံထိန်းတပ်ရင်းတို့၏ ခုခံမှုကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသော်လည်း၊ ယင်းဖြစ်ရပ် ပူပူနွေးနွေးရှိနေသေးသည့်အချိန် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ မောင်တောမြို့ပေါ်တွင်ပြုလုပ်သော ဒီမိုကရေစီ လူထုဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင် ထိုမေလ(၁၃)ရက်ဖြစ်ရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းအောင်က တစ်ပတ်ရိုက် ဟောပြောသွားခဲ့ဖူးသည်။
(Coral Arakan အတွက် ဥတုခင်စိုင်း က ဓါတ်ပုံများကို စုစည်းပေးကာ သောင်းကြွယ် က ရေးသားသည်။)
BY YeYint Nge ... 12/28/2012 1 comment
လိုင်ဇာပတ်ဝန်းကျင်မှာ အစိုးရတပ်တွေက အားလုံးနေရာ ယူထားကြပြီ
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KIA ဌာနချုပ် အခြေစိုက်သည့် လိုင်ဇာမြို့အား မြန်မာ စစ်တပ်များက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် ၀ိုင်းရံ ထားပြီဖြစ်၍ ဒေသခံ ကချင်ပြည်သူများက မိမိတို့နေ အိမ်အနီးတွင် ဗုံးခို ကျင်းများ တူးနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့နံနက် ၉နာရီခန့်မှစတင်ပြီး ၁၁နာရီဝန်းကျင်အထိ အစိုးရတပ်များက စစ်တိုက်လေယာဉ် ၂စင်းနှင့် ရဟတ်ယာဉ် ၃စင်းဖြင့် လဂျားယန်သို့ ထိုးစစ်ဆင် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး လိုင်ဇာမြို့တွင်လည်း စစ်တပ်များထိုးစစ်ဆင်လာဖွယ် အနေအထား တွေ့ရှိ နေ ရသဖြင့် ဒေသခံများက ဗုံးခိုကျင်းများ တူးဖော်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့-KIO က အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန ဒု-တာဝန်ခံ ဆလန်ကပါဒွဲပီဆာက ပြောသည်။
၎င်းက “အခုဆိုရင် လိုင်ဇာပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဘက်ဘက်ကနေပြီး အစိုးရတပ်တွေက အားလုံးနေရာ ယူထားကြပြီလေ။ ဒီကနေ့မှာလည်း သူတို့က အပေါ်ကနေ စပစ်နေပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ဦးမလဲတော့ မသိသေးဘူး။ သူတို့ရဲ့အထက်က လည်း ခြေလျင်စစ်ကြောင်းတွေထိုးဖို့ ဖိအားပေးထားတယ်လို့လည်း ကျနော်တို့အဖွဲ့တွေ ကြားသိထားတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ လဂျားယန်နှင့် KIA ဌာနချုပ်တည်နေရာ လိုင်ဇာမြို့သည် ၈မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရှိပြီး လဂျားယန်ဒေသခံများက လက်ရှိအချိန်တွင် လိုင်ဇာဘက်သို့ ရောက်နေကြ ပြီဖြစ်ကြောင်း KIA ဘက်က ဆိုသည်။
လိုင်ဇာမြို့ဒေသခံ ကချင်အမျိုးသားတစ်ဦးက “တချို့အိမ်တွေကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့ကတည်းက ဗုံးခိုကျင်းတူးနေကြ တာ။ ဒီနေ့ လဂျားယန်မှာ ရဟတ်ယာဉ်က ဗုံးကြဲတော့ စက်သေနတ် မီးပွင့်တာတောင် မြင်ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ လိုင်ဇာနားလဲ စစ်တပ်တွေ ရောက်နေကြပြီဆိုတော့ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းက အိမ်ရှေ့ ဒါမှမဟုတ် အိမ်နောက်တွေမှာ ဗုံးခို ကျင်း တူးထားကြတယ်”ဟု ပြောသည်။-
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အ...
ဒီလှိုင်းကိုတစ်ဆင့်မြှင့်ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်ခုလို ထ...
မဒေးကျွန်း တရုတ်စီမံကိန်းတွင် အလုပ်သမား အများအပြား...
"ဦးပိုင်" "၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ" နှင်...
"NLD ပညာရေးကွန်ရက် ၂ နှစ်ပြည့် အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းမ...
မြန်မာ့ အာမခံ လုပ်ငန်းက သေဆုံးသူ ဦးပြား ဆိုင်ကယ်သ...
နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ...
ကြိုးကိုင်သူ မောင်တော ဒေါက်တာထွန်းအောင်၏ ကွန်ရက်ြ...
လိုင်ဇာပတ်ဝန်းကျင်မှာ အစိုးရတပ်တွေက အားလုံးနေရာ ယူ...